Roger Bate: Zimbabwe's Road to Ruin - WSJ
Nationalizing foreign-owned businesses could doom what's left of this economy.
Zimbabwe is back in the news, and again for all the wrong reasons. Last week Indigenization Minister Saviour Kasukuwere announced that any firm worth more than $500,000 will be required to sell a controlling 51% stake to black Zimbabweans. This effectively means that all of Zimbabwe's foreign-owned industries are to be nationalized. This policy was first threatened in 2008, but now it appears set to be pushed through—just when you thought Zimbabwe had suffered all the policy disasters it possibly could.
That rhetorical smokescreen can not hide the facts: White-owned companies did not enslave hundreds of local villagers to mine Zimbabwe's newly discovered Marange diamond fields—Zimbabwe's military did. That's the same military that is controlled by Mr. Kasukuwere's and President/Despot Robert Mugabe's Zanu-PF party, and the same military that waged a war over access to diamonds in the Democratic Republic of Congo, which resulted in the deaths of many Zimbabwean soldiers and even more innocent Congolese, while lining the pockets of the Zimbabwean military elite.